Hay’adda Amnesty Oo Mareykanka Ugu Baaqday Inuu Magdhow Siiyo Dhibanayaasha Rayidka Ee Duqeymaha Cirka Ee Soomaaliya | Berberatoday.com
Hay’adda Amnesty Oo Mareykanka Ugu Baaqday Inuu Magdhow Siiyo Dhibanayaasha Rayidka Ee Duqeymaha Cirka Ee Soomaaliya
Muqdisho(Berberatoday.com)-Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday Mareykanka inuu magdhow siiyo dhibanayaasha rayidka ah iyo qoysaska ay saameeyeen duqeymaha cirka ee Soomaaliya.
Dhacdadu waxay dhacday 2-dii Febraayo meel u dhaw magaalada Jilib ee koonfurta Soomaaliya. AFRICOM waxay soo sheegtey in hal argagixiso la dilay.
Waxay sheegtay inay heshay sideed eedaymood oo ah waxyeelada rayidka kadib dhacdadaas.
Amnesty waxay tilmaamtay in warbixinta, tii labaad ee noocan oo kale ah, ay ahayd markii ugu horreysay ee AFRICOM ay si rasmi ah u xaqiijiso warbixin ku saabsan khasaaraha rayidka ee shacabka Soomaaliya ka soo gaadha howlgalkooda.
“Waa in ay jirtaa isla xisaabtan iyo magdhawga dhibbanayaasha iyo qoysaskooda, ”ayay tidhi Amnesty.